Mayelana ne-Us-Liaocheng Kunmei Bearing Co., Ltd.
I-Liaocheng Kunmei Bearing Co., Ltd. itholakala eDolobheni lase-Linqing, eSifundazweni saseShandong, “enedolobha Lasekhaya Le-Bearings e-China”.Imboni ethwalayo iyathuthukiswa lapha futhi nelogistics iyashesha.Yasungulwa ngo-2001, inkampani ingumkhiqizi okhiqizayo ohlanganisa i-R&D, ukuklama, ukukhiqiza nokuthengisa.
Inkampani inemigqa eminingi yokukhiqiza ezenzakalelayo ethuthukisiwe nemishini yokuhlola.Kukhona abasebenzi abaqeqeshiwe be-R & D kanye nethimba lokukhiqiza elinamakhono.Yamukela ubuchwepheshe obuthuthukisiwe.Khiqiza ama-bearings amabhola e-groove ekhwalithi ephezulu nokunemba okuphezulu, ama-pillow block bearings, ama-roller ama-tapered nama-roller bearings ayindilinga ngokuhambisana ngokuqinile nezindinganiso zikazwelonke.Imishini yokuhlola ethuthukile nokuhlola okwenziwa ngesandla okuyinkimbinkimbi, ukuhlola okukabili kusho ukuqinisekisa ikhwalithi yeqoqo ngalinye lemikhiqizo, imikhiqizo ithengiswa kahle e-China futhi ithunyelwe eYurophu nase-United States naseRussia, eMalaysia, eSingapore, eNdiya, njll. Amazwe nezifunda.Kunconywa iningi lamakhasimende.
Ngesikhathi esifanayo, inkampani iphinde isakaze ama-brand bearings abakhiqizi abakhulu eSweden, eJalimane, e-United States, eJapane nakwamanye amazwe.Inkampani inamandla aqinile, izinhlobo eziphelele namamodeli, kanye nempahla eyanele.Ukunikezwa kufike ngesikhathi futhi kutholakala kumakhasimende ngentengo engcono kakhulu.
Imikhiqizo ethwala i-KM isetshenziswa kabanzi emishinini yezolimo, izimoto, izinjini zomoya, i-metallurgy, izimayini, i-petroleum, amakhemikhali, amalahle, usimende, iphepha, imishini esindayo nezinye izimboni.
"Ukunaka imininingwane, ukuphishekela ubuhle" ifilosofi yethu.Vumela imizamo yethu ivumelanise nomhlaba.Win-win namakhasimende.
dala imikhiqizo yekhwalithi, isevisi yenhliziyo yonke, yenza izinzuzo
ubunye, ukwethembeka, ubungane, ukukhuthala, enterprising
Sinda ngokwethembeka, uthuthuke ngekhwalithi
Konke Ofuna Ukukwazi Ngathi
I-Liaocheng Kunmei Bearing Co., Ltd.
Ububanzi bebhizinisi obuyinhloko
izitolo ezinkulu kanye nezitolo zama-bearings nezinye izinsimbi, uwoyela wokugcoba, i-hardware motor kanye nemikhiqizo yenjoloba
Umkhiqizo Osezingeni eliphezulu
Isipiliyoni sokukhiqiza esisebenzayo, amandla afakazele uhlobo.
Khiqiza imikhiqizo yekhwalithi futhi unikeze isevisi engcono kakhulu.
Nikeza amakhasimende ngokufaneleka kakhudlwanaamasevisi.